8Yar (အိပ်ယာ): 2011
နိုဝင်ဘာလကစပြီး 8Yarတို့ အိမ်ရှာပုံတော်ဖွင့်လိုက်တာ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကျော်ကျော်လောက်ကမှ ရှာလို့တွေ့သွားတယ်။ အိမ်ရှာတယ်ဆိုလို့ အိမ်အလုံးလိုက်ရှာတယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်။ 8Yarတို့ တစ်အိမ်လုံးလည်း မတတ်နိုင်ဘူး၊ တစ် Flat လုံးလည်း မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ရှာတာက Common room လေး တစ် room ပါ။ အဲဒီ Common room လေး တစ် room ရှာရတာ အတော်ပင်ပန်းသဗျာ။
လူဆိုတာကလဲ အခက်သားလား…. လိုတာမရ ရတာမလို ဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ်အိမ်ရှာနေတယ်ကြားတော့ သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်က ပေါင်းပြီး တစ် Flat ငှါးရအောင်လို့ လာပြောတယ်။ မေးကြည့်လိုက်တော့ သူဖက်က မိန်းကလေး ၅ ယောက်တဲ့။ တေပီပေါ့ဂျာ…. မချော ငါးယောက်၊ ကိုယ် အခြောက် အဲလေ…. ကိုယ်တစ်ယောက် ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ မဖြစ်ချေဘူး ဆိုပြီး မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ငြင်းလိုက်ရတယ်။ ဟူး တော်သေးတယ် သူက အသာတကြည်လက်ခံသွားလို့။ :P
ကိုယ်နေချင်တာက ယောင်္ကျားတွေနဲ့ အဲ… တမျိုးမတွေးနဲ့နော်။ ဆိုလိုချင်တာက အခြားအခန်းက ယောင်္ကျားတွေနေစေချင်တာကိုပြောတာပါ။ ယောင်္ကျားလေးတွေ ဆိုရင်ရှင်းတယ်။ သိပ်စကားမပြောရတော့ဘူး။ ပြောပြီဟေ့ ဆိုရင်လဲ ဓားကိုင်ပြောရတယ်။ ဟီး…. ကြက်သွန်လှီးနေတုန်း လာပြောလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော့။ ယောင်္ကျားတွေကြီးပဲ ဆိုရင်လဲ အဲလိုအဲလိုရှင်းကြလွန်းလို့ မကောင်းပြန်ဘူး။ Couple ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ တစ်ခုခုဆိုရင် သူလူသူထိန်း၊ ကိုယ့်လူကိုယ်ထိန်း ဆိုတော့ မဆိုးလှဘူးပေါ့။ အဲလိုမှမဟုတ်ပဲ သူလူကိုယ်ထိန်းပြီး ကိုယ့်လူသူလာထိန်းရင်တော့ ပြဿနာပိုကြီးနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ 8Yarတို့ကစေတနာကောင်းတော့ ကိုယ့်လူထက် သူ့လူကိုပဲသွားသွားထိန်းချင်နေမိတယ်။ ခစ်ခစ် :P နောက်တာနော် တော်ကြာ 8Yarကို ကြာကူလီထင်နေအုံးမယ်။
အဲဒီလို ဟိုတွေးဒီတွေး၊ ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ ရှာလိုက်တာ တွေ့မဲ့တွေ့တော့ ကိုယ်နေနေတဲ့ Block ရဲ့ တစ် Block ကျော်မှာသွားတွေ့တယ်။ အခန်းလေးက အကောင်းကြီးမဟုတ်သလို၊ အဆိုးကြီးထဲမှာလည်း မပါဘူး။ အဆင်ပြေလောက်တယ်လို့ ယူဆလို့ယူထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ပြောင်းမယ့်နေရာက ကိုယ်နေလာတဲ့ Clementi ထဲမှာဆိုတော့ ထူးထူးခြားခြား အပြောင်းအလဲတော့ မဖြစ်လောက်ဘူးလိုတော့ထင်တာပဲ။
ဟိုး အရင်ကတော့ 8Yarတို့ အခန်းရှာတာ Online ကမရှာဘူး။ အပြင်ထွက်ရှာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ Online မှာရှာလို့ရမှန်းကိုမသိလို့။ အဲလိုတော်တာ…. :D ကိုယ်နေချင်တဲ့ မြို့နယ်ရဲ့ MRT(ရထားဘူတာ) အောက်က အိမ်ခန်းကြော်ငြာဘုတ်မှာ Singapore မြေပုံတစ်အုပ်နဲ့ အကြာကြီးရပ်ပြီးရှာခဲ့ရတဲ့အခါတွေလည်းရှိသလို ခဏလေးရှာပြီး စိတ်ပျက်လာလို့ပြန်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်။ စိတ်ပျက်ရတဲ့အကြောင်းက ကြော်ငြာဘုတ်မှာက အကျိုးဆောင်တွေများတာရယ်၊ စလုံးအိမ်ရှင်တွေက အချက်အပြုပ် လက်မခံကြတာရယ်၊ ဧည့်သည် လက်မခံတာရယ်နဲ့ မြန်မာလို့ပြောလိုက်ရင် သူတို့ရှာတာက မလေးလူမျိုးနဲ့ တရုပ်လူမျိုးလို့ပြောတာရယ် ကြောင့်ပါ။ အဲ့လိုပြောလာတော့ 8Yarတို့က မခံချင်ပြန်ဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် ပုဆိုး ကတောင်းကျိုက်ပြီး ထိုးကွင်းတွေသွားပြမလို့ စဉ်းစားလိုက်သေးတယ်။ တို့ အရမ်းနံမည်ကြီးသွားမှားဆိုးလို့ စိတ်လျှော့ပြီး ငါကမြန်မာပြည်က တရုပ်ဆိုပြီး တရုပ်လိုပြောလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ ဪ... မင်းက တရုပ်လူမျိုးကိုး ဆိုပြီး ဒီမှာဘာ Pass ကိုင်ထားလဲကနေ အစချီပြီး Interview သလို ဒရစပ်မေးတော့တာပဲ။ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်မြန်မာကိုထိထားတာဆိုတော့ တစ်ခွန်းပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်။ မင်းပြောတော့ မြန်မာကိုမငှါးဘူးဆို၊ ငါကလည်း မြန်မာကို မငှါးတဲ့ အခန်းကို အလကားနေခိုင်းတောင် မနေဘူးလို့ပြောပြီးဖုန်းချလိုက်တယ်။ ကိုယ်က မချရင် သူကပြန်ချသွားမှာစိုးလို့ ခပ်သွက်သွက်ပဲချလိုက်တယ်။ ဖုန်းကိုပြောပါတယ်။ :P အဲလိုတွေတွေ့ရရင် အတော်ပဲစိတ်ပျက်မိပါရဲ့။ အမှန်တော့ ကိုယ့်ဖက်က ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိသလို သူတို့မှာလဲ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ 50% 50% မို့လို့စိတ်ဆိုးစရာမရှိပါဘူးလို့ပဲ စိတ်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ မဖြေလို့လည်း မရဘူးလေနော့။ မဖြေရင်ကျသွားလိမ့်မယ် စိတ်ဓာတ်….. :P
နောက်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောပြလို့ Peninsula Plaza မှာမြန်မာအိမ်တွေရှာလို့ရတယ် ဆိုမှ 8Yar တစ်ယောက်အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။ အခုမှ Singapore ကိုရောက်ပြီး မသိသေး သောသူငယ်ချင်းတွေအတွက် အိမ်ရှာချင်တယ်ဆိုရင် Clementi က ကောင်းစုံစတိုးမှာသွားရှာနိုင်သလို Peninsula Plaza မှာဆိုရင် ဒေါ်သန်းသန်းနုစတိုး မှာလဲရှာနိုင်ပါတယ်။ Peninsula Plaza ကအခြားဆိုင်တွေမှာလည်းရှာလို့ရတယ်လို့ကြားပါတယ်။ အတိ အကျတော့မသိပါ။
ရှာပုံက အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဆိုင်တွေက စာအုပ်ထားပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီစာအုပ်မှာ မြန်မာလူမျိုးအိမ်ရှင်တွေနဲ့ အိမ်သူကြီးတွေက သူတို့ငှါးချင်တဲ့ အခန်းရဲ့ Detail နဲ့ ဆက်သွယ်ရမဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးပြီးထားခဲ့ပါတယ်။ ငှါးချင်တဲ့သူက အဲဒါတွေဖတ်ပြီးကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဖုန်းဆက်ကာ အိမ်သွားကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် စရံပေးခဲ့ပေတော့ဗျာ။ အဲဒီလို အိမ်ရှင်၊ အိမ်ငှါး အဆင်ပြေအောင် စာအုပ်ထားပေးတဲ့ ဆိုင်တွေကိုတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်မိပါရဲ့။
ကျွန်တော်လည်းဒီနောက်ပိုင်း အပြင်မှာသွားရှာဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တာရယ်၊ အပျင်းထူတာရယ်ကြောင့် Online ကနေပဲရှာပါတယ်။ Online မှာရှာရင် လူအတော်သက်သာပေမယ့် မျက်စိညောင်းပြီး ခေါင်းမူးပါတယ်။ မသောက်ပဲမူးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Online ကနေအိမ်များများရှာပါလို့ အကြံပြုပါရစေ။ :D Online မှာရှာချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်က Link တွေထဲကနေသွားပေတော့ဗျာ။
Singapore Site ( Singapore Site တွေက အများကြီးပါ။ Google မှာရှာလိုက်ရင်တွေ့မှာပါ။ အခု ဆိုက်လေးက မဆိုးဘူးလို့ယူဆလို့ စလုံး အိမ်ရှင်နဲ့နေချင်သူတွေအတွက် ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။)
ဪအကြံပေးဖို့တစ်ခုကျန်သွားတယ်။ လိုချင်တဲ့ဟာလေး မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရသွားအောင်လို့ Site ရဲ့ Search Box ကိုသွားပြီး ကိုယ်နေချင်တဲ့နယ်မြေ ဒါမှမဟုတ် အခန်းအမျိုးအစား လေးကိုရိုက်ပြီးရှာပါလို့ အကြံပြုပါရစေ။ ဥပမာ Orchard မှာနေချင်တယ်ဆိုရင် Orchard ပေါ့။ Master Bed Room မှာနေချင်တာဆိုရင် Master Room ပေါ့။ Key Word ကိုတစ်လုံးထဲရိုက်စေချင်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် လိုရာမရောက်မှာစိုးလို့ပါ။ ဘလော့ဂ်မောင်နှမတွေကိုလည်း Post အကြွေးတွေကြိုးစားဆပ်နေပါတယ်လို့ ပြောကြားရင်း Post လေးကိုရပ်နားပါရစေခင်ဗျာ။
အားလုံး အဆင်ပြေ၊ ပျော်ရွှင်၊ ကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။
Posted by 8Yar at 4:21 pm 21 comments
ဂါရဝပြုခြင်း နှင့် Nine Emperor Gods
Nine Emperor Gods Post လေးကိုမစခင် ကျွန်တော် အခက်ခဲမျိုးစုံ ကျော်ဖြတ်နေ ချိန်မှာ တကူးတကာ လာအားပေးပြီး စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့ Comments တွေလာပေးကြတဲ့ ဘလော့မောင်နှမတွေနဲ့ စာဖတ်သူများဖြစ်ကြတဲ့
တို့နှင့် CBox မှာလာ အော်ကြတဲ့
တို့အပြင် Comments မရေးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အမြဲလာအားပေးတဲ့ စာဖတ်သူများနဲ့ ဘလော့မောင်နှမများ အားလုံး အားလုံး ကို ကျွန်တော် 8Yar မှ ကျေးဇူးတင်ခြင်းများစွာဖြင့် ရိုသေစွာ ဂါရဝ ပြုလိုက်ပါသည်။
ဘလော့မောင်နှမများနဲ့ စာဖတ်သူများရဲ့ အားပေးစကားတွေဟာ ကျွန်တော့ အတွက်တော့ တကယ့် အားဆေးတွေပါ။ ကျွန်တော် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားရင်ဆိုင်ပါ့မယ်လို့ ကတိပြုရင်း ကျွန်တော် အရှေ့က Post မှာ ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်း ရေးလက်စ လေးကိုကြိုးစားပြီးတင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Nine Emperor Gods 九皇大帝
Nine Emperor Gods ဆိုတာ ရန်ကုန်မှာကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ တရုတ်ရှင်ဥပဂုတ်ပွဲဟုဆိုလျှင် လူအတော်များများသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ သူ့ကိုရေမျောပြီးပူဇော်ရလို့ ခေါ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တရုတ်လိုတော့ ကျိုဝမ်ရယ် (Jiu Wang Ye 九王爷 ) ဒါမှမဟုတ် ကျိုဝမ်တ,သိ (Jiu Huang Da Di 九皇大帝) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကို တည့်တည့်ပြန်ရင် ဘုရင်ကိုးယောက် လို့ ပြန်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Online ပေါ်က Site အချို့ မှာတော့ GrandFather လို့ အဓိပ္ပါယ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
Nine Emperor Gods သမိုင်းကြောင်းမှာ အယူအဆနှစ်မျိုးကွဲသွားပါတယ်။ ပထမ အယူအဆမှာ ဒီနတ်တွေဟာကောင်းကင်ကကြယ်တစ်လုံးစီကို အစိုးရတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ အဲဒီကြယ်ကိုးလုံးကတော့ Vega Star, Polaris Star နဲ့ The7Northern Constellation Stars တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိထက်ပိုရှင်းသွားအောင် ပုံနဲ့စာလေးကို ဒီဆိုက် ကနေကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1. "Gou Chen Tian Huang Da Di 勾陈天皇大帝" (Vega Star)
2. "Bei Ji Zhi Wei Da Di 北极紫微大帝" (Polaris Star) ဓူဝံကြယ်
3. The7Northern Constellation Stars (called "Bei Dou Qi Xing 北斗七星") ခုနှစ်စင်ကြယ်:
a. "Tan Lang 贪狼"
b. "Ju Meng 巨门"
c. "Lu Chun 禄存"
d. "Wen Qu 文曲"
e. "Lian Zhen 廉贞"
f. "Wu Qu 武曲"
g. "Po Jun 破军"
တို့ပဲကြပါတယ်။ ကောင်းကင်ကဒီကြယ်ကိုးလုံးရဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာမှုဟာ လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ ဆက်စပ်နေမယ်လို့ ကိုးကွယ်သူအချို့ကယုံကြည်ပါတယ်။
ဒုတိယ အယူအဆတစ်မျိုးက ရေပြင်ကိုအပိုင်စားတဲ့သူ (သို့) စွေးကွေ (水鬼) လို့ခေါ်ပါတယ်။ စွေးကွေကို တိုက်ရိုက်ပြန်ရရင် ရေသရဲလို့ပဲ ပြန်ရမှာပါ။ ရေသရဲဆိုတာ ရေသရဲငါးကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရေမှာသေတဲ့သူ၊ အစိမ်းသေသောသူကို ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုလျှင် ဦးရှင်ကြီးလိုနတ်မျိုးလို့ထင်ပါတယ်။ ဦးရှင်ကြီးနတ်ကိုတော့ မြန်မာပြည်သားတွေ ရင်းနှီးပြီးသာမို့ မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ သူ့ကိုပူဇော်သူအများစုက ရေလမ်းသွားသောသူတွေ၊ ပင်လယ်နဲ့အသက်မွေးသူတွေ၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ ပင်လယ်တွေနားမှာနေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Nine Emperor Gods ပွဲကို ကိုးလပိုင်းမှာ ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ ကိုးလပိုင်း၊ ကိုးရက်နေ့မှာ ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ နတ်တွေကိုရေလမ်းကနေကြိုရသလို ပြန်ပို့တော့လည်း ရေလမ်းကနေပြန်ပို့ရပါတယ်။ သွားကြိုတာ သိပ်မခေတ်စားပေမယ့် ပြန်အပို့မှာတော့ ရေမျှောပွဲအဖြစ် အကြီးအကျယ်စည်ကားလှပါတယ်။ ရေမျှောပွဲမတိုင်ခင် ပွဲမှာပါဝင်မယ့်သူတွေနဲ့ ကိုးကွယ်သူတွေဟာ သတ်သတ်လွတ်ကို ကိုးရက်၊ ဆယ်ရက်နဲ့ တစ်လစားကြရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ကိုးရက် မစားနိုင်ခဲ့ရင် ခုနစ်ရက်၊ ငါးရက်၊ သုံးရက်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ရေမျောပွဲလိုက်ပို့မယ့် တစ်ရက်သာစားကြပါတယ်။ အသီးအရွက်စားခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို သန့်ရှင်းစေတယ်လို့ အယူရှိကြပါတယ်။
အဲဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာကတော့ သတ်သတ်လွတ်နှစ်မျိုးရှိကြောင်းပါ။ တစ်ခုကို တရုတ်သတ်သတ်လွတ်လို့ခေါ်ပြီး၊ တစ်ခုကို မြန်မာသတ်သတ်လွတ်လို့ခေါ်ပါရစေ။ တရုတ်သတ်သတ်လွတ်ကိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ စားတာသိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ ထိုင်ဝမ်လူမျိုးနှင့် ထိုင်ဝမ်ဘုရားကိုးကွယ်သူ အချို့သာစားကြပါတယ်။ တရုတ်သတ်သတ်လွတ်က ကြက်ဥ၊ဘဲဥ၊ငုံးဥ စတဲ့ဥတွေဟာ အကောင်မဖြစ်သေးလို့ သတ်သတ်လွတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသီးအရွက်ထဲမှာ ကြက်သွန်နီ၊ဖြူ စတဲ့အနံ့ထွက်စေတဲ့ အသီးအရွက်တွေဟာ သတ်သတ်မလွတ်ဘူးလို့ တရုတ်သတ်သတ်လွတ်သမားတွေက ဆိုကြပြန်ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးက မြန်မာသတ်သတ်လွတ်ပါ။ ဒီမြန်မာသတ်သတ်လွတ်ကိုတော့ လူတော်တော်များများသိကြသလိုပါပဲ။ မြန်မာသတ်သတ်လွတ်သမားဟာ အသားနဲ့ အသားကဖြစ်တဲ့ အစားအစာတွေလုံးဝစားလို့မရပါဘူး။ အသီးအရွက်မှန်သမျှစားလို့ရပါတယ်။ Nine Emperor Gods ပွဲကျင်းပရာတွင် မြန်မာသတ်သတ်လွတ်ပုံစံမျိုးကိုပဲ စားကြပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ စင်္ကာပူမှာတော့ သတ်သတ်လွတ်စားပုံခြင်းတူပြီး အခြားဒေသတွေမှာတော့ ကျွန်တော့အနေနဲ့မသိပါ။
ဒါလေးကတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံက တရုတ်ဘုရားကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ Nine Emperor Gods ပွဲကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကတော့ သတ်သတ်လွတ်စားပြီး နတ်တင်ထားတဲ့ ထမ်းစင်ကိုထမ်းပြီး က မဲ့သူတွေပါ။
အခုစပြီး နတ်ကိုထမ်းစင်ပေါ်တင်ပါပြီ။ နတ်ကိုကျောင်းထဲက ပင့်လာချိန်မှာ ယခုကဲ့သို့ပိတ်စအဝါနှင့်ကာပြီးပင့်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကို အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အကြီးဆုံးနှစ်ယောက်သာ ၀င်ခွင့်ရပြီး ကျောင်းအတွင်းမှ ထမ်းစင်ပေါ်သို့ပင့်ဆောင်ရာလမ်းတလျှောက် ခြေလှမ်း သုံးလှမ်းခန့်ဒူးထောက်ပြီး လမ်းလျှောက်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထိုပင့်ဆောင်ချိန်တလျှောက်လုံး အပြင်မှလူနှစ်ယောက်ဟာ မောင်းအဆက်မပြတ်တီးပေးကြရပါတယ်။
နတ်ပင့်ပြီးရင် နောက်ထမ်းစင်တစ်ခုမှာ အမွှေးတိုင်ပြာအိုးပင့်ပါတယ်။ ထိုအမွှေးတိုင်ပြာအိုးဟာ ဤကျောင်းပိုင်နတ်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒါကလေးကတော့ လုံချွမ် (龙船) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရေမျောတဲ့အခါ ထည့်မျောလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအပေါ်မှာကပ်ထားတဲ့ အ၀ါရောင်စာရွက်လေးတွေကတော့ လူနာမည်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အလှုရှင်တွေရဲ့နာမည်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ကားလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ ကား Crazy တော်တော်များများဟာ လန်ဘိုဂီးနီး ပြိုင်ကားလေး (Lamborghini Sports Cars )ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ လန်ဘိုဂီးနီးကားက အတော်လေးဈေးများသလို ကားပြိုင်ရှင်ဟာလည်း ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်လို့ စ’လုံးမတွေပြောကြပါတယ်။
ကားနံပါတ်ကိုကြည့်ပါအုံး။ SFN 9G တဲ့။ SFNကတော့ စင်္ကာပူရဲ့ကားရှေ့အက္ခရာပါ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကားနံပါတ်9Gကိုပါ။ 9Gဆိုတော့ Nine Gods ပေါ့။ ကားပိုင်ရှင်က ဒီနတ်ကို တော်တော်လေးယုံကြည်ပုံရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဒီနံပါတ်ကို လေလံစွဲမှသာရနိုင်တာမို့လို့ပါ။ ဒီကားကအထွက်မှာ ရှေ့ဆုံးက ဦးဆောင်မဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကားတွေ လိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်တော့မသိ သူကားတော့ ပြေးမဲ့ပုံ :P
ယာဉ်တန်းသွားရာလမ်းတလျှောက် မပိတ်ဆို့အောင် လိုက်ပါကူညီမဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ယာဉ်ထိမ်းရဲတွေပါ။ အနီးကပ်မရိုက်ရဲလို့ အဝေးကနေ လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။
ကျောင်းကထွက်ခါနီး အရင်ကရပါတယ်။ ပြီးမှစထွက်ကြပါတယ်။ နတ်ထမ်းစင်ကိုထမ်းပြီး စကကြပါပြီ။ ထမ်းစင်ကိုလွှဲပြီးကရတဲ့အတွက် ထမ်းရတဲ့လူတွေ တော်တော်အီမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကတဲ့လူလေးယောက်ဟာ အရပ်အမောင်းနဲ့ဟန်ချက်ညီရင် အတော်လေးကြည့်ကောင်းပါတယ်။ ကပုံမှာ ဘယ်ဘက်ကိုနှစ်လှမ်းတက်၊ ညာဘက်ကိုတစ်လှမ်းဆုတ်နည်းနဲ့ ကခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ကျောင်းထဲမှာ ကနေချိန်တွင် ၀ှားချဲ (花车) လို့ခေါ်တဲ့ အလှပြယာဉ်တန်းတွေ စပြီးထွက်ခွာကြပါတယ်။
Nine Emperor Gods အလံတင်ထားသော အလှပြကား
ပြီးတော့မှ Nine Emperor Gods စထွက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ မြန်မာပြည်နဲ့ မတူတာက ကျောင်းကထွက်ထွက်ခြင်း မြစ်ကမ်းကိုသွားပြီး ရေမျှောပွဲတန်း မလုပ်ပါဘူး။ ယာဉ်တန်းဟာ Singapore မှာရှိတဲ့ အခြားနတ်ကျောင်းတွေကိုသွားပြီး ဂါတ၀ပြုရပါတယ်။ တစ်နေကုန်ဂါရ၀ပြုပြီး ညရောက်မှရေမျောပွဲကို ကျင်းပကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရေမျောတဲ့အထိလိုက်ချင်ပေမဲ့ ကျွန်တော့မှာ အချိန်လည်းမရှိ၊ ကားလည်းမရှိ လေးဘက်ထောက်ပြေးရင်တောင် လန်ဘိုဂီးနီးကိုမှီဘို့ရာမမြင်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့မှာ လက်လျော့ပြီးပြန်ခဲ့ရလို့ Postလေးကို ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်နားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။
(မှတ်ချက်။ ။ ဒီPostဟာ နတ်ကိုးကွယ်ရန်တိုက်တွန်းခြင်းမဟုတ်သလို၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း နတ်မကိုးကွယ်ပါ။ ကိုယ်ကျိုးအတွက် နတ်ပူဇော်လိုသည့်အခါမျိုးတွင်တောင်မှ ရတနာသုံးပါးကို အရင်ဦးချပြီးမှ နတ်ပူဇော်လေ့ရှိပါသည်။ ဗဟုသုတရစေရန် သက်သက်သာ ရည်ရွယ်၍ကျွန်တော်သိသမျှ မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအရာနှင့် အရေးအသားမှားယွင်းမှုရှိပါက ကျွန်တော်၏ညံ့ဖျင်းမှုဖြစ်ပါကြောင်း ၀န်ခံထားပါရစေ။ )
Posted by 8Yar at 3:37 pm 24 comments